Ramen Stir Fry Recipe Quick iyo Easy
Cunnooyinka ugu muhiimsan ee Carruurta
Sida Loo Helo Caruurta Ku Caawiya Inaad Samayso Cunto Hilibka Laga Sameeyo Ramen Stir Fry
Maadaama aad tahay hooyo shaqeyneysa, waxaad dooneysaa cunnooyin toddobaadle ah oo fudud in la sameeyo oo dhakhso u yimaado miiska jikada. Wax walbaa waa ka sii daran xanuunka caloosha iyo caruurta hunguriga leh! Aan ka hadalno mid ka mid ah cunnooyinka ugu fudud ee aad sameyn kartid, iyadoon loo eegin sida ay calooshaada u tahay.
Ramen noodles waa hab ka badan saxan adiga kulliyadda. Waa saldhigga cusub ee cunnooyinka asbuucii aad jeceshahay ! Cuntadani sidoo kale waa wax ay caruurtu kaa caawin karaan si ay uga caawiyaan inay maskaxdooda ka saaraan calooshooda caloosha.
Waa kuwan sida adiga iyo caruurtaada ay u sameyn karaan cunnadan si ay u hesho miiska xitaa dhakhso!
Cabbiraan iyo karkarinta Caddadka saxda ah ee biyaha
Marka hore, intaad ka soo saartid walxaha walxaha ee maalin walba, caruurtu waxay qabsadeen dher weyn iyo koobkii qiyaasta. Alaabta wax lagu kariyo ee ku jira qashinka yar yar ku hayso si sahlan oo loo helo caruurta. Ilmahaaga ha dheriyo dheriga 7 koob oo biyo ah. Haa, baakadu waxay sheegeysaa laba koob oo laakin ma ahan mid ku filan in la cuno baastada (kalsoonow!).
Ciyaarahaaga ha la ciyaaro Ramon Noodles
Intaad dharka ku shubeyso kariyaha si aad u karkariso, sii caanahaaga Ramen noodles. Waxaad tuuri kartaa boodhka Ramen ee biyaha karkaraya, laakiin way fiicnaan kartaa marka barkudku jabo. Sii cunugaaga xirmadaada oo aan la furin oo ha ku dhejiyo boodhka Ramen (yup, badan oo xiiso leh!).
Cunto Noodle ee Jidka toosan
Sababtoo ah waxaad isticmaashaa biyo ka badan tilmaamaha lagu sheegay in aad u baahatid inaad cunto karisid wakhti dheer, Samee saacadda shan daqiiqo ka dibna ku dhiirigeli carruurtaada in ay miiska saaraan ka hor inta aan la joojin.
Saacadda saddexda daqiiqo, isku daa boodhka si aad uga caawiso inuu jabiyo. Ka dib marka la joojiyo, ka qaad dheriga kuleylka iyo daadi noodleka.
Xulo Isku Duubka Saxda ah
Mid ka mid ah miisaanka ugu fiican ee cuntada la cuno ayaa karsanaya baasto ramen ka dibna ku darso wax kasta oo haraaga ku jira qaboojiyaha. Tani waxay noqon kartaa digaag, doofaarka, hilibka lo'da, hilibka dufanka leh iyo hilibka doofaarka, sausage, tofu ee borotiinka. Kadibna ku dar khudrado barafaysan (ama ka bood hilibka oo kaliya cagaaran) waxaad isticmaali kartaa suunka biyaha, digirta dabka, broccoli, basbaaska, basasha, basasha cagaaran iyo xitaa la jarjaray ukunta la kariyey.
Samee Gluten-This free
Haddii aadan cuni karin qamriga, ma cuni kartid caanaha Ramen (waan ogahay, waa nadiif dhab ah). Laakiin waxaa jira siyaabo siyaabo kala duwan oo loo kariyo cunto karis la'aanta ah ! Kala iibso baastada bariiska oo aad ku karsatid maraq digaag ah, dhowr xabo digaag ah oo digaag ah iyo Dashi deg deg ah (laga helo qaybta Aasiyada ee dukaanka xaafaddaada). Waxaad dooran kartaa inaad ku iibsato bouillon digaag ee foomka budada ah iyo sidan oo kale, karkariyo maraq digaag, ka dibna marka walxo isku walaaqaya budada ilaa dhadhanka la rabo.
Fadlan ha daalin haddii bouillon yahay gluten-free ama aan lahayn. Waxaan adeegsaneynaa calaamadeynta calaamadeyaha Hormel.
Xalka kale ee la isku daro waa inay ku daraan suugada soodhaha leh ee aan lahayn gluten-ka iyo fareeshka saliida bacriminta si loogu daro kuleyl.
Cunto weyn oo wayn ayaa la sameeyey
Cuntadan, iyadoon loo eegin haddii aad ka sameysid gluten-free ama maya, waa inay kugu qaadataa ilaa shan iyo toban daqiiqo si aad u sameyso. Qodobka hoose wuxuu u adeegi doonaa saddex cunno cunno weyn, ama laba qof oo waaweyn iyo laba carruur ah.
Waxaa soo cusbooneysiiyay Elizabeth McGrory
7 koob oo biyo ah
2 baakooyinka baastada Ramen
Ku buufinta wax karinta cabaada
6 oz. digaaga (la kariyey, caleemaha ama xabadaha, hilibka doofaarka, ama hilibka kale)
1 koob oo khudradda la qaboojiyey ee aad dooratay
Karkari 7 koob oo biyo ah 5 daqiiqo. Si wanaagsan u miir.
Ku buufin fiilo leh buufin aan wax ku duubin. Kuleyl dhexdhexaad ah, ku dar baasto, khudaarta, iyo digaaga ama kalluunka, haddii loo baahdo.
Daadi hal baako (ama mid ka mid ah fursadaha gluten la'aanta ah ee kor ku xusan) ee kor ku xusan. Karso ilaa khudaarta ay diirimaadaan oo ay farsamadu ku qoslaan.
Ukunta qashinka ku dar nadiifinta iyo walaaq si fiican u kariyo ilaa ukunta si fiican loo kariyo. U adeegso.
Sidee looga jawaabaa Su'aalaha "Waa maxay Cunnada?" Iyada oo Hig ah
Qadada dugsiga ee carruurta
5 Cunto fudud oo qado ah qof waliba wuu jecel yahay
Kaga Jeexo Cunto degdeg ah iyo Qoys fudud Qoyskaagu wuu jecel yahay
101 Hudheelaha 'Hijrada' ee Hoyga ama Guriga
Kidiyaha raashinka qadada leh ee aad jeceshahay waad ka bixi kartaa waqti aan waqti lahayn
Digaagga Digaaga iyo Khudaarta Dabiiciga ah ee loo yaqaan Pie Casserole
Cunto-karaynta ee Koonfur-bari Aasiya
Cuntada Koonfur Asiya
Dufanka Digaaga iyo Daraasada la kariyey ee la kariyey
Mexican-style digaaga Rotisserie
Doofaarka la riixay: Suugaanta
Qodobka macmacaanka Coconut Easter Eggs
Kalamari waa maxay?
20 Nalalka, Qulqulka Qulqulka Qulqulka Kalluunka ee Kale
Xakameyaha Daqiiqada Daraasadaha Dalka
Flambe Talooyin iyo Kaqshid Qalabyo
Ma jirin macmacaan la dubay
Honey Dew Me cuntooyinka (Shooter)
Penne Pasta oo leh Qalabka Cuntada Cusub